Mampidi-doza amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsangatsanganana an-trano any Australia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Mampidi-doza amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsangatsanganana an-trano any Australia
Airlines • Airport • Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny fanarenana an-trano haingana any Aostralia dia mety tandindomin-doza noho ny tranga fitsangatsanganana, ary mihitatra ny fanidiana ny sisintany, na eo aza ny fanamafisana ny tinady ao amin'ny H1 2021.
Ny fanidiana sy ny fanidiana ny sisintanim-panjakana dia natao hampalemy sy hampiadana ny famerenana ny dia an-trano.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Qantas mitsangana eo ambany fiasan'ny mpiasa dia manambara ny fahatsinjovana làlana lava kokoa mankany amin'ny fanarenana.
Ny fiakaran'ny aretina dia miteraka dona amin'ireo orinasam-pizahantany.
miaraka Aostralia miady amin'ny fiakaran'ny tranga COVID-19, dia nihena be ny dia an-trano. Na dia natanjaka aza ny fanarenana an-trano an'i Aostralia tamin'ny H1 2021, ny famerenana ny fanidiana ny fanidiana sy ny fanidiana ny sisintanin'ny fanjakana dia ho vokany ary hametraka sy hampihena ny fanarenana ny dia an-trano. Ankoatr'izay, Qantas ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mitsangana eo ambany fiasan'ny mpiasa dia manambara ny fahatsinjovan-dàlana ho lava kokoa amin'ny fanarenana.
Ny famerenana an-trano haingana any Aostralia dia mety tandindomin-doza rehefa mitombo ny tranga, ary mihitatra ny fanidiana ny sisintany, na eo aza ny fanamafisana ny fangatahana ao an-trano ao amin'ny H1 2021. Ny vinavinan'ny indostria farany farany dia manantena ny fitsangatsanganana an-trano hiverina amin'ny fitsangatsanganana 93.8 tapitrisa amin'ny 2021, hiverina amin'ny 80.4% fitsangatsanganana mialoha ny COVID (2019), fa ny delta variant kosa mety hanakana ity fanarenana matanjaka ity. Aostralia dia nitazona ny fihazonana ny COVID-19 ho ambany farafahakeliny ny tahan'ny otrikaretina sy ny fameperana henjana mifehy ny dia iraisam-pirenena, voatazona hatrany ny tranga.
Ny fitomboan'ny areti-mifindra dia miteraka dona amin'ireo orinasam-pizahantany, miankina amin'ny mpandeha an-trano amin'izao fotoana izao hatramin'ny faran'ny taona 2022 farafaharatsiny, rehefa mety hisokatra indray ny sisintany iraisampirenena. Raha maharitra ny lockdowns ary milatsaka ny fahatokisan'ny mpandeha dia mety hihena ny fangatahana ary mety ho ela ny fanarenana an'i Aostralia.
Ny fameperana vao tsy ela akory izay dia mosarena ny indostrian'ny fizahan-tany any Aostralia, ary ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra ao amin'ny firenena - Qantas - dia manomboka mahatsapa manaikitra amin'ny alàlan'ny fanakanana mpiasa 2,500.
Ny fanarenana an'i Qantas dia nifantoka tamin'ny zotra anatiny izay nikatona ny sisintany iraisam-pirenena. Ny mpitatitra dia nanomboka niaina fanarenana misy dikany, na dia nanjary olana aza ny fiakaran'ny tranga. Ny fihenan'ny tampoka amin'ny dia an-trano sy ny fanitarana ny hidin-trano dia nampidina ny fomba fijery antenaina an'ny mpitatitra. Ny hetsika haingana nataon'i Qantas dia hampihena ny vesatra ara-bola amin'ny fahaverezan'ny fifamoivoizana ary tokony hanampy amin'ny fiarovana ny fivelaran'ny zotram-ho avy amin'ny ho avy. Na izany aza, ny fanarenana izao dia mety hahena indray mandeha raha ajanona ny fameperana satria mandany fotoana ny famerenana ireo mpiasa ary mety hampiadana ny ezaka fanitarana.
Vetivety i Aostralia nanao vaksiny ny olom-pireneny noho ny tahan'ny tranga ambany. Na izany aza, mametraka fanamby izany ary mety hanemotra ny fihenan'ny fangatahan'ny mpandeha raha toa ka manomboka mahazo ny fahatokisan'ny mpandeha izany.
Ny vaksininy dia nanome tosika ny fahatokisan'ny firenena hafa ary manomboka manamafy ny famerenana amin'ny laoniny ny dia. Miaraka amin'ny fandrosoana vaksiny voafetra dia ao ambadiky ny firenena hafa i Aostralia. Mihena ny tahan'ny vaksiny, ny mpandeha dia mety ho tsy sahy mandeha raha tsy misy ny vaksininy satria nitombo ny risika ankehitriny. Noho izany, afaka ahemotra izao ny fanarenana mandra-pahatongan'ny fandaharan'asan'ny fanaovam-baksiny ary lasa matoky tena indray ireo mpandeha Aostralianina.